Umthandazo kuSan Ramón Nonato? Ukuthula Cwaka kunye nabafazi abakhulelweyo [+]
Umthandazo eSan Ramón Nonato Esona sixhobo sihle sabafazi abakhulelweyo kuba saziwa njengomnye wabangcwele abanceda ngokukhethekileyo abo bakhulelwe.
Ewe unokucelwa ezinye izinto ukuba, nokuba imeko injani na, uya kusithethelela.
Imithandazo inamandla amakhulu, asinakuwathoba amandla abo.
Abanye baphelelwe lukholo kwaye kungenxa yendlela eliyiyo ihlabathi namhlanje kodwa ekuphela kwethemba esinalo akufuneki ukuba lilahleke.
Ngu umthandazo singenza yonke into ibe ngcono kwaye xa kukho iimeko eziqinileyo ebomini, sinokusabela kuyo ukuba sifumane amandla kwaye siqhubeke nendlela.
1 Umthandazo kwi-Holy Ramón Nonato ungubani?
1.1 Umthandazo kuSan Ramón Nonato ukuvala imilomo
1.2 Umthandazo weSan Ramón Unato ngokuchasene nokuhleba
1.3 Kubafazi abakhulelweyo
Umthandazo kwi-Holy Ramón Nonato ungubani?
Igama lesiqhulo elithi non natus, elithetha ukuba azalwe.
Yanikwa ngoba umama waphulukana nobomi bakhe ngaphambi kokuba uSan Ramón abone ukukhanya kwehlabathi elitsha elalizokumamkela. Esi sesinye sezizathu zokuba abe yenye yeengcwele kubafazi abakhulelweyo.
Ibali lakhe libuyele kunyaka ka-1200 xa yayilixesha lokuzalwa, emva kokuba emdala ukuba ukholo olungagungqiyo lwamsa eAfrika apho wanceda khona uninzi njengomhlanguli.
Injongo yakho ephambili yayikukunikezela egameni lamanye amabanjwa Babekwimeko embi kakhulu.
Emva kokuphathwa gadalala, umantyi omnye wayalela ukuba aqhubane ngcono nombono wokufumana uhlangulo olucwangcisiweyo.
Nangona kunjalo, iSan Ramón Nonato inoxanduva lokulandela ukushumayela nokunceda abo babeyidinga kwathi kamsinya nje ukuba umantyi amgwebele ukufa, isigwebo esathintelwa ngenxa yokuba bahlawula intlawulelo yakhe bakhululwa.
Umthandazo kuSan Ramón Nonato ukuvala imilomo
I-Holy Ramon Nonato ngamandla akho kwaye uThixo ukunike ukuba undinike oku ndiyakucela ukuba ubeke ukhiye emlonyeni kwabo bafuna ukundenza kakubi.
(Chaza igama lomntu / abantu)
Abantu abathetha kakubi ngam okanye abakhohlakeleyo kum, bafuna ukundifaka ebubini, ndikhanyisela eli khandlela ukuba uvale imilomo.
Kwaye uyayifeza le nto ndiyicelayo kuwe, ngoba ushumayele ngelizwi likaThixo, kwaxelwa ukuba kube yimfela-mbuso ukuthwala ukhiye emlonyeni wakho.
Mamela umthandazo wam, uSamonon Nonato, umthandazo wethu, ukuba uthi cwaka, uthandaze phambi koThixo uBawo, abo bathetha kakubi ngam.
Umnqweno ovuthayo wokukhululeka kwamakhoboka, uhlala undinqanda kwiilwimi ezimbi, ezintshabeni, nakubanikezeli.
Kwabo bafuna ukundenzakalisa, ndenze ukuba ndiphile ngoxolo kwaye ndihlukane nabo bonke abo banxaxayo kwaye bandingcungcuthekisa.
Ukuba ngenxa yomona, ubungendawo okanye ingqumbo, ndifuna ububi obuvela kwabo bafuna ukundingcikiva ngezinyeliso, iSan Ramón Nonato.
Ngobubele bakho obukhulu, ungasishiyi isicelo sam ungabhekwanga ndiyakucela kwiNkosi yethu uYesu Krestu.
Ukuba ufuna ukuvala imilomo, lo ngumthandazo ochanekileyo weSan Ramón Nonato.
Ilizwi likaThixo liyalumkisa malunga nendlela eyingozi inokuba lulwimi lomntu, izimvo zihlala zibulala ngaphezulu kwesibhamu.
Yiyo loo nto kwi icawe yobuKatolika kwaye kwindalo ka Krestu sikholelwa ukuba iSan Ramón Nonatos inokusinceda ukuba siwuthulise loo milomo ivulekileyo isenza kakubi ngendlela enkulu.
Eli linyathelo loxolo ebusweni beli nyathelo lonakalisayo kuba asizibekeli mbuyekezo ngqo kodwa sicela ukuba ibe ngoyena mntu ungcwele oxanduva lokuvalela abo basonzakalisayo.
Umthandazo weSan Ramón Unato ngokuchasene nokuhleba
Owu, Salmon Nonato odumileyo, wena, ngokuyalela ilizwi likaThixo, ukwabe ngokutshutshiswa ukuba uthwale isitshixo somlomo.
Yiva ukumiselwa kwam kwaye ungenelele phambi koThixo weNkosi yethu ukuze abo bathetha kakubi ngam baGqibe ukuzama kwabo kwaye ndiza kukhuseleka kuwo nawuphi na umyalezo ombi okanye onobungozi ...
Ndicela undincede, Thixo wam oPhakamileyo, ovumele uSanta Ramon Nonato ukuba azimisele ukukhulula amakhoboka, efuna ukuba alwele.
Ngamana ungasoloko undishenxisa ekuzithobeni, kwisono esihlukanise nam kuwe, kwaye ndiphumelele ngoxolo kwaye ndibashiya ngasemva kubo bonke abo bandigibayo, bandicinezela.
Ukuba uyakwazi ukwahlukaniswa ngonaphakade nabachasi abathi, ngenxa yayo nayiphi na into, ubugqwetha okanye ingqumbo, bandinqwenelele ububi.
Okanye bafuna ukundibeka ihlazo kunye nehlazo labo.
Thixo ongumenzi, ndiyamkela ukuba wena ngenceba yakho enkulu, kwaye ngongenelelo lukaSamson waseNamon Nonato, awuzukushiya isicelo sam sidelelekile.
Ndiyanicenga, ngendalo yenu, uYesu Krestu, iNkosi yethu ethandekayo, olawula kunye nani kuMoya oyiNgcwele u-Ramon Nonato.
Nina nihlala kufutshane kakhulu noThixo niyamcela ngobunzima bam, ukuba andisokuze ndikuswele ukuzikhusela nokuzikhusela, ukuba idiploma yakho eyaziwayo yandinceda kuyo yonke imizuzwana emibi kunye nemeko enzima.
Ukuhleba kukubi okunokuthi konakalise usapho, ubuhlobo okanye imeko yomsebenzi. Uninzi olungathandekiyo kunye nomonakalo omkhulu ngokufihlakeleyo kangangokuba asiqapheli de kube kwenziwe ububi.
Umthandazo weSanta Ramon Nonato ngokuchasene nokuhleba Kuyanceda ukuba ukhuseleke kobu bubi.
Ungasicelela thina okanye umhlobo okanye iqabane elikumngcipheko.
Into ebalulekileyo ngalo mthandazo kunye nayo yonke, lukholo olwenziwe ngayoKufuneka sithembele ukuba ukuba siyabuza, impendulo kaThixo iya kuhlala isifikelela, nokuba imeko yethu injani.
Owu San Ramón Nonato
Ndiza kuwe ndichukunyiswa bububele obungathethekiyo ngabo ubaphatha kakubi.
Yamkela, Wena oyiNgcwele wam, le minqweno ndikunika yona ngokuzithandela, ukhumbula imithandazo yakho ebaluleke kakhulu, kangangokuba bathi bakufikelela kuThixo owenze umthetheleli okhethekileyo wabafazi abakhulelweyo.
Nantsi, iNgcwele yam, omnye wabo bathobekileyo phantsi kwenkuselo nokhuselo lwakho, ndikubongoza ukuba njengokuba unyamezelo lwakho lwalugcinwa lungagcinwanga kuzo zonke iinyanga ezisibhozo apho wabulawelwa khona ngendlela engathethekiyo ngedolo.
Kwaye ezinye iintlungu ozichithe ngaphakathi emhadini omnyama kwaye kwinyanga yesithoba uzishiye zonke ezo ntolongo zikhululekile, ngcwele kunye negqwetha lam, ngokuthobekileyo ndikucela ukuba undifikele kuThixo wam neNkosi yam ...
Ukuze isidalwa esifakwe ngaphakathi kum ngaphakathi sizilondoloze ebomini nasempilweni iinyanga ezisibhozo, ngolwesithoba sihambe sikhululekile ekukhanyeni lweli lizwe, likwenze, wena oyiNgcwele wam, ukuba kanye kanye ngala mhla umphefumlo wakho uphume ngawo Emzimbeni wakho yayilusuku lwangeCawa, olu lusuku lokuvuya nolonwabo, ukuze umhla wokuzalwa kwam wonwabe uze wonwabe, nazo zonke ezo meko uyazi ukuba zilungele uzuko olukhulu ngakumbi lukaThixo kunye nawe nosindiso lwam. umphefumlo nonyana wam.
La Umthandazo kubafazi abakhulelweyo de San Ramón Nonato yenye yezona zinto zintle onokuzithandaza.
Umkhuseli othembekileyo kwabona basweleyo, iSan Ramón Nonatos engaziwa njengoncedo okanye umhlanguli wabafazi abakhulelweyo.
Siyazi ukuba ukuba ukhulelwe obunye ubomi yimeko eyenza umntu abe sesichengeni.
Kuyo nayiphi na imeko kaxakekaUkuba kukho umngcipheko omkhulu wokukhulelwa okanye enye ingxaki, le ngcwele iba yindawo enkulu yokusabela.
Kuyo yonke inkqubo yokutshelwa komzimba kuyacetyiswa ukwenza itheko eSan Ramón Nonato kubafazi abakhulelweyo mihla le apho icawa yamaKatolika ilungiselele lo mzuzu ubalulekileyo kubomi bomntu wonke.
Into efunekayo kuphela lukholo olucelwe ngalo.
Zininzi Amakholwa athi afumene uncedo kule ngcwele ngaxa lithile xa beyifuna.
Ukusukela oko wayesemhlabeni, waye unomdla wokunceda abasweleyo ngaphandle kokuphulukana okanye ukubeka esichengeni impilo okanye inkululeko yabo kwinkqubo.
Eyona nto wayeyikhathalela yayikukunceda nokugcina ukholo kuye wonke umntu adibana naye.
Oku kuhlala kunjalo nanamhlanje, nokuba kudlulile iminyaka emininzi ukusweleka kwakhe, uSan Ramón Nonato usaqhubeka nokubonelela ngoncedo lwexesha elifanelekileyo kwabo bakwimo yomngcipheko wokomoya okanye wokomoya.
Nangona kunjalo, ukholo luyimfihlo eyenza ukuba umthandazo ngamnye ube namandla, ibhayibhile eNgcwele iyasikhuthaza ukuba sibuze ngamanye amaxesha xa sifuna uncedo kunye nokubulela izipho zethu.
Eyona nto ibaluleke kakhulu thandaza umthandazo San Ramón Nonato ngokholo!